MasterCard's CFO: Cryptocurrency ukuthenga ekufukuleni ikhasimende imali yethu - Blockchain Izindaba
Mastercard liye landa ukusetshenziswa ngokwengxenye ngenxa abasebenzisi ukuthenga cryptocurrency.
cross-border amavolumu Inethiwekhi wenkokhelo – ngezinga elithile imali kwamakhasimende phesheya – ivukile 22 amaphesenti kude kangaka lo nyaka, okugqugquzelwa ingxenye amaklayenti usebenzisa amakhadi abo ukuthenga zezimali digital, wathi Chief Financial Officer Martina Hund-Mejean ngoLwesine. imali Ephakeme ekuhambeni baseYurophu nabo nomthelela, uthe.
"Vele sicacise, singazi ukushintshela noma hlala cryptocurrency ukuthengiselana ngenethiwekhi yethu,"Kusho Hund-Mejean ku usocingweni abahlaziyi. "Izinhlelo zethu ungacabangi lolu hlobo umsebenzi uzoqhubeka njengoba asinayo umugqa obonayo kanjani abanikazi bamakhadi uyobheka cryptocurrencies esikhathini esizayo."
Ngaphezu kwe 1200 magazine retail...
Thumela Previous:Umkhiqizo ASIC chips Samsung
Thumela Landelayo:UPS Amafayela patent ukwamukela Bitcoin for emalokha